China HENGYITONG Smart Conveyor Roller Drive, Kwadoro ngwa ngwa iji mepụta ngwa ngwa na ndị nrụpụta Ihe adabako
HENGYITONG Smart Conveyor Roller Drive, Kwado ngwa ngwa iji wepụta ngwa ngwa
Mgbe emechara mgbasa nke COVID-19 corona-virus, a ga-ewughachi usoro ntinye ngwa ahịa zuru ụwa ọnụ, ,lọ ọrụ smart logistics na-akwado teknụzụ dị elu dịka 5G, ọgụgụ isi na nnukwu data ga-eweta nnukwu mmepe. A na-atụ anya na n'ime afọ ise na-esote, a ga-akwalite nkwakọba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ụlọ nkwakọba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ebe niile. Advanceddị dị elu nke smart logistics bụ ngwa miri emi na njikọta miri emi nke ọgụgụ isi na ngwaọrụ ndị nwere ọgụgụ isi. Teknụzụ dị elu dịka mmekọrịta ozi, nkesa dijitalụ, na ime mkpebi ọgụgụ isi ga-abụ nke mbụ a ga-eji na mgbanwe na mmelite nke ụlọ ọrụ lọjistik. Dị ka akụkụ dị mkpa nke smart lọjistik, usoro ọgụgụ isi ngwa ngwa ga - abụ ọnụọgụ maka ịkwalite arụmọrụ nke arụmọrụ lọjistik. N'etiti ha, ihe ọhụrụ na nwelite nke Smart Conveyor Roller Drive Teknụzụ abụrụla ihe kachasị mkpa iji meziwanye usoro nhazi.
Smart Conveyor Roller Drive bụ usoro nkenke nkenke na igwe eji arụ ọrụ, na 90% nke ngwaahịa ndị ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ ugbu a na-adabere na ụdị European, American na Japanese, n'ihi na miniaturization nke ngwaọrụ chọrọ teknụzụ dị elu na usoro. N'ebe a na-ebufe ngwa ngwa na ntinye ngwa ngwa, ụdị ndị nwere oke kachasị bụ INTERROLL nke Germany, KYOWA nke Japan. N'ime nchịkọta na nnyefe dị arọ, Seaparks nke US bụ onye ndu ahịa, yana nchekwa ọgụgụ isi na ụlọ ọrụ ụgbọala na-adọba ụgbọala nwere akụkụ ụfọdụ nwere ahịa.
Smart Conveyor Roller Drive, nke nyere ụlọ ọrụ lọjistik nsogbu n'ihi na ọ bụ naanị maka teknụzụ, nwere ọnụ ahịa nnweta dị elu yana ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ. N'ịchọ na nsogbu nke ogologo oge nke ụlọ ọrụ lọjistik, iji mebie ihe niile ma belata ọnụahịa nke ụlọ ọrụ lọjistik, Hengyitong enweela ihe ịga nke ọma mepụtara nkenke ụlọ ụlọ obere na ọkara sivo na-agbakọ ngwaahịa ngwaahịa na nyocha ngwa ahịa na nyocha teknụzụ, ọ bụkwa ya bu ụzọ kpoo ya n'ahịa ụwa.
Nchịkọta nke ndapụta ngwa ọrụ nke nhazi ọrụ na ụlọ ọrụ lọjistik, maka Mmanụ na-ebugharị Conveyor Roller Drive, usoro nhazi ahụ na-eji griiz imikpu n'ime mmiri iji mee ka ọ dị ọkụ na ikpofu ọkụ. Nzube a siri ike izere nsogbu nke ikpo ọkụ nke ihe nkiri mmanụ na-ete mmanụ kpatara site na ikpo ọkụ nke drum na-ebute n'oge njem njem ọsọ ọsọ, n'ihi na nsogbu kpo oku nke ọkụ eletrik bụ ihe a na-apụghị izere ezere n'oge ọrụ ọsọ ọsọ.
Ntuli nke mmanu mmanu nke emeputara site na ihe omuma nke uzo na agba ga eme ka nsogbu na-aga n'ihu na oghere mechiri emechi. Mgbe gia na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, nrụgide dị elu nwere ike ịkwụsị naanị nrụgide dị n'ime site na ịpịpụta mmanụ mmanu site na ọdịiche dị n'etiti oghere kọntaktị na n'akụkụ abụọ nke njedebe. N'ihi ebumnuche dị n'elu, ndị ọrụ na-ahazi ụdị ọrụ dị oke mkpa ga-egosipụta ọhụụ nke mmanụ mmanụ si na mmanụ-mikpuru Conveyor Roller Drive.
Iji dozie nsogbu siri ike nke onye ọrụ ahụ, HENGYITONG na-eji ihe ọhụụ iji mee ka njikarịcha njikarịcha, họrọ ịgbakwunye ihe ndozi ndozi ego na ngwugwu ngwongwo moto, mgbe Smart Conveyor Roller na-arụpụta, a na-ewepụ ụlọ ahụ iji hụ na igwe ahụ dị na-agba ọsọ na steeti agụụ, nke na-ewepụta oghere na-agbanwe maka mmanụ na gas volatility, wee wepu nsogbu nke njedebe mkpuchi mmanụ n'okpuru oke ibu gburugburu. HENGYITONG butere ụzọ na iwere teknụzụ a na ụlọ ọrụ ahụ, ma tinye akwụkwọ maka nka na teknụzụ maka teknụzụ a pụrụ iche.
Smart Conveyor Roller Drive bụ ihe dị mkpa na-arụ ọrụ na-aga n'ihu ma na-agba ọsọ ọsọ ọsọ. Site na teknụzụ HENGYITONG a mara mma, enwere ike ịchịkwa ọnọdụ gburugburu ya na-arụ ọrụ n'ime 45 ℃. Ọ bụghị naanị na ọ ga-egbo mkpa nke ikuku ikuku, mana enweghịkwa mmanụ nke enweghị mmanụ na ọkụ ọkụ, mana ọ na-agbatị ndụ ọrụ nke ngwaahịa ahụ ma nweta nsonaazụ kacha mma na-arụ ọrụ n'oge ndụ ọ bụla, ọ na-egosipụta HENGYITONG ike technology nnyocha na mmepe ike na elu nhazi ike.
Okwesiri ikwuputa na HENGYITONG na-agbaso usoro mmepe nke teknụzụ nwere ọgụgụ isi, na-achọ ma na-agbaghasị teknụzụ dị ogologo oge na ọnụ ahịa nke ụfọdụ ụdị na Smart Conveyor Roller Drive, akụrụngwa nke ọgụgụ isi, Na-eweta ọnụ ahịa karịa. - oke nhọrọ maka ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ nwere ọgụgụ isi, ọkachasị ụlọ ọrụ lọjistik, mgbanwe na nkwalite nke ụlọ nkwakọba ihe na nhazi usoro
Post oge: Apr-17-2020